ဒူဒူကြီး: Flow metering - Vortex shedding flow meter
'bluff' တနည်းအားဖြင့် flattened front ဆိုတဲ့၊ ရှေ့မျက်နှာပြင်ပြားနေတဲ့ shedder တွေကို၊ fluid flow ရဲ့ direction နဲ့၊ ထိတွေ့စေပြီး၊ flow rate ကိုဖတ်ယူတဲ့၊ flow meter ကို၊ Vortex shedding flow meter လို့ခေါါပါတယ်။ bluff တွေကို၊ fluid flow မှာထားလိုက်တဲ့အခါ၊ flow profile တွေဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။
Fig. Vortex shedding behindacircular cylinder
flow profile မှ၊ vortices တွေကို၊ detect လုပ်နိုင်သလို၊ ရည်တွက်ပြီး၊ display အနေနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ flow range အပေါါမူတည် ပြီး၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ vortex shedding ဟာ၊ flow velocity နဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျတဲ့အတွက်၊ flow rate အဖြစ်ပြောင်းလဲတွက်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
bluff body ဟာ fluid flow ကို block ဖြစ်စေတဲ့အတွက်၊ စီးဝင်လာတဲ့ fluid ဟာ၊ bluff body အနားမှာ direction ပြောင်းသွားသလို၊ မူလရှိနေတဲ့ velocity ပါလိုက်ပါပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ fluid ဟာ bluff body ရှိတဲ့နေရာကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ၊ velocity ထပ်မံပြောင်းလဲ ပါတယ်။ bluff body လို့ခေါါတဲ့ shedder ရဲ့ ရှေ့မှ velocity နဲ့ နောက်မှ velocity ဟာမတူညီပဲ၊ bluff body ရှေ့မှာ velocity နည်း ပြီး၊ နောက် မှာတော့ velocity များပါတယ်။ high velocity side မှာ pressure နည်းပြီး၊ low velocity side မှာတော့ pressure များ ပါတယ်။
Fig. Vortex shedding flow meter
bluff body နဲ့ pipe diameter အကြား ဧရိယာဟာနည်းသွားတဲ့အတွက်၊ fluid ဟာ တွန်းကန်ထွက်သွား ပြီး၊ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ fluid ကိုဝင်ရောက်စေပါတယ်။ ဆက်ကာဆက်ကာဝင်လာတဲ့ fluid ကြောင့်၊ rotational motion တွေဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ flow ကို spinning vortex အနေနဲ့ဖြစ်ပေါါစေ ပါတယ်။ spinning vortex ရဲ့ frequency နဲ့ fluid velocity တို့မှာ၊ near-linear relationship ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ရှိပြီး၊ correct condition တခုမှာ၊ ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
f = Shedding frequency (Hz), Sr = Strouhal number (dimensionless), u = Mean pipe flow velocity (m/s) နဲ့d= Bluff body diameter (m) ဆိုပြီး၊ တွက်ယူကြပါတယ်။ equation မှ Strouhal number ဟာ၊ Reynolds number လို၊ dimensionless ဖြစ်ပြီး၊ fluid density ပြောင်းလဲပေမယ့်၊ constant အနေနဲ့ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူdဆိုတဲ့ bluff's body diameter ဟာလည်း၊ constant ဖြစ်ပါတယ်။
A ဟာ၊ flow meter တွေအတွက်၊ design fluid constant ဖြစ်ပြီး၊ A တန်ဘိုးကို၊ equation မှာအစားထိုး တဲ့အခါ၊ 'f = k x u' အဖြစ်ရရှိ လာပါတယ်။ 'u' ဆိုတဲ့ Mean pipe flow velocity (m/s) ဟာ
ဖြစ်ပါတယ်။ volume flow rate 'qv' ကို၊ 'A = area of the flow meter bore (m²)' ထည့်သွင်းကာ၊
ဆိုတဲ့၊ equation နဲ့ တွက်ယူနိုင်ပါတယ်။ Vortex shedding flow meter တွေကို၊ high velocity နဲ့ high pressure drop application တွေ မှာ၊ reasonable turn-down ratio နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားနေ တဲ့ moving parts တွေမပါသလို၊ flow resistance အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။
Fig. Vortex shedding flow meter - typical installations
low flow မှာတော့၊ spinning vortex ဆိုတဲ့၊ pulse သို့မဟုတ် shedding frequency မရရှိနိုင်တဲ့အတွက်၊ meter မှာ "loss flow' အနေနဲ့  ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ vibration ကြောင့် meter accuracy errors တွေပေါါပေါက်နိုင် သလို၊ upstream pipe line ကို၊ long straight line အဖြစ်တတ်ဆင်အသုံးပြုဖို့၊ လိုအပ်ပါတယ်။